Webtrends Demos Falanqaynta Jiilka Xiga | Martech Zone
Arbacada, Maarso 2, 2011 Khamiis, Maarso 3, 2011 Douglas Karr
Waxaan joogaa shirka Webtrends Engage ee San Francisco waxaanan heystaa tan fiidiyowyo fiidiyoow ah iyo waxyaabo aan kula wadaagi doono toddobaadyada soo socda. Waxaan u baahday inaan fiidiyowgaan isla markiiba soo baxo inkasta oo…
Webtrends wuxuu ka boodayaa tartan kasta oo la sii daayo bisha Abriil ee soo socota - oo ay ku jiraan HTML5 isticmaale adeegsade, khibrad isticmaale cusub, isdhexgal adag oo mobilada iyo warbaahinta bulshada, iyo isdhexgalka PostRank xogta.
Ka eeg shaashaddo badan oo yaab leh goobta Falanqaynta 10 goobta Haddii ay dhacdo inaad isweydiiso haddii kuwani yihiin uun majaajillo… Maya! Kooxda Webtrends waxay hoos u dhigeysay nooca si toos ah inta lagu gudajiray shirka!
Tags: Shimbiraha Horebuugaagta suuqgeyntacalaamadeynta bulshada